अल्लु अर्जुनका प्रशंसक चिढाउने सलमानको गीत 'सिटी मार'! :: Setopati
अल्लु अर्जुनका प्रशंसक चिढाउने सलमानको गीत 'सिटी मार'!
एजेन्सी काठमाडौं, बैशाख १६
सलमान खानको फिल्म 'राधे' को 'सिटी मार' बोलको गीत ट्रेन्डिङमा छ। फिल्म निर्माण घोषणा भएदेखि कुनै न कुनै चर्चामा रहँदै आएको राधेको गत हप्ता ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि चर्चा ह्वात्तै बढ्यो।
तीन दिनअघि 'सिटी मार' गीत सार्वजनिक भएपछि सलमानका प्रशंसकलाई जति उत्साहित बनायो, उनका आलोचकलाई उति नै चिढायो। सलमानलाई सामाजिक सञ्जालमै टिप्पणी गरे- फिल्म पनि रिमेक, गीत पनि रिमेक!
हो पनि, राधे कोरियन फिल्म 'द आउटलज'को रिमेक हो भने 'सिटी मार' दक्षिण भारतीय स्टार अल्लु अर्जुन र पूजा हेगडे अभिनित तेलगू फिल्म 'दुवदा जगन्नाधम (डीजे)' को हिन्दी भर्सन हो। त्यसो हो भने सलमानको 'राधे'को आफ्नै पहिचान चाहिँ के?
बलिउडमा सलमानको क्रेज भएजस्तै दक्षिण भारतमा अभिनेता अल्लु अर्जुनका प्रशंसक छन्। अहिले सलमानलाई प्रश्न उठाउने अल्लु अर्जुनका प्रशंसकहरु हुन्। गीत कपी गरेको भन्दै कतिपय प्रशंसकले यतिसम्म भने, 'अल्लु अर्जुन भाइ, बलिउडको तर्फबाट सरी!'
कतिसम्म भने, 'राधे'को 'सिटी मार' गीतमा अभिनेत्री दीशा पटानीसँग सलमान नाचेका छन् तर तल कमेन्ट बक्सभरी अल्लु अर्जुनको नाम देखिन्छ।
प्रशंसकहरु सामाजिक सञ्जालमा भिडिरहे पनि सलमान र अल्लु अर्जुनबीच सिटी मार गीतकै सन्दर्भमा रमाइला कुरा भइरहेका छन्।
'सिटी मार'सँग मिलाउँदै एक जनाले लेखेका छन्, 'कपी मार, कपी मार...'।
'अल्लु अर्जुन सिटी मारका लागि धन्यवाद। तपाईंले जुन अन्दाजमा यो गीतमा प्रस्तुति दिनुभएको छ, त्यो गज्जब छ। तपाईंको नाच्ने अन्दाज र सरलपन हरेक कुरा कमालको छ। आफ्नो ख्याल राख्नु र सुरक्षित रहनू,' गीत सार्वजनिक भएपछि सलमानले ट्विट मार्फत अल्लु अर्जुनलाई यसरी धन्यवाद भने।
यसको जवाफमा सलमानलाई अल्लु अर्जुनले लेखे, 'धन्यवाद सलमान गुरु। तपाईंबाट प्रशंसा पाउनु एकदमै ठूलो कुरा हो। यो एकदमै मीठो व्यवहार हो। राधे हेर्न प्रतीक्षारत छु कि सिटी मारले तपाईंलाई कस्तो असर पार्नेछ। मायाका लागि धन्यवाद!'
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १६, २०७८, १६:०६:००